Magetsi Emagetsi Ekuyedza Equipment Vagadziri |China Electric Energy Test Equipment Suppliers & Factory
GDYM-1A Single phase Electric Energy Meter Calibrator iri multi-parameter yekuyeresa chiridzwa chakazara dhijitari, mullti-inoshanda uye yakakwirira nemazvo.
Iko kukanganisa, voltage, ikozvino, inoshanda uye inoshanda simba, chikamu, frequency, uye simba chinhu chinogona kuyerwa panguva imwe chete, zvakare vector nhamba uye wiring mhedzisiro icharatidzwa.
GDYB-S3 Three Phase Energy Meter Test System (3 zvinzvimbo)
GDYB yakatevedzana Inotakurika Magetsi Emagetsi Meter Yekuedzwa System yakakodzera kuyedzwa akasiyana echikamu matatu emagetsi simba mita ye 0.2 kirasi uye pazasi.Iine chitarisiko chakanaka, mabasa akazara uye kuita kwakanakisa.
GDYB yakatevedzana Single Equal Potential Multi-function Electric Energy Meter Test System yakanyatso kugadzirwa yechitatu chizvarwa chemagetsi programmable matatu chikamu chemagetsi simba mita multifunctional bvunzo system zvinoenderana neazvino nyika zviyero uye mirau.
GDYB-S6 Three Phase Energy Meter Test Bench
GDYB yakatevedzana Single/Three Phase Energy Meter Test Bench inoshandiswa kuyera marudzi akasiyana eimwe/matatu echikamu metres e0.1% zvichidzika.Iine chitarisiko chakanaka, mabasa akazara uye kuita kwakanakisa.
GDYB yakatevedzana Matatu Equal Potential Multi-function Electric Energy Meter Test System yakanyatso kugadzirwa yechitatu chizvarwa chemagetsi programmable matatu chikamu chemagetsi simba mita multifunctional bvunzo system zvinoenderana neazvino nyika zviyero uye mirau.
GDPQ-5000 Power Quality Analyzer
GDPQ-5000 Power Quality Analyzer ndeye yakazara bvunzo chiridzwa chakanyatsogadzirwa nekambani yedu uye chakanyatsogadzirirwa bvunzo yemunda yezvikamu zvitatu, yakawanda-inoshanda uye nehungwaru, yakapfupika man-muchina mashandiro.
GDPQ-300E Power Quality Analyzer chishandiso chinotakurika chekuyedza uye chekuongorora simba system kushanda kwemhando.Inotarisisa uye inounganidza data munguva refu inomhanya, inopawo harmonic kuongororwa uye simba remhando yekuongorora.
GDPQ-300A Handheld Power Quality Analyzer
GDPQ-300A Power Quality Analyzer chishandiso chinotakurika chekuyedza uye kuongorora simba system kushanda kwemhando.Inotarisisa uye inounganidza data munguva refu inomhanya, inopawo harmonic kuongororwa uye simba remhando yekuongorora.
GDYM-3F Inotakurika Yakawanda-inoshanda Energy Meter Calibrator
Panguva imwe chete edzai maviri akaonekwa pulse, uye inogara, inoshanda maitiro uye nhamba yeanoonekwa mapurusi panguva imwe chete anogona kunge akasiyana zvachose.
GDDO-20C AC/DC Magetsi Meter Calibration Chidimbu chinoshandiswa kuona kukanganisa kwemhando dzakasiyana dzemagetsi ma frequency emagetsi masisitimu emagetsi, anosanganisira voltmeter, ammeter, wattmeter, ohmmeter, single phase & three phase AC simba metres (optional) uye basic error of DC volt mita uye ammeter.